Vaovao - Ny laser CO2 dia afaka manisy marika amin'ny haben'ny artifisialy sy voajanahary maro karazana
Masinina fanamarihana laser laser Fanamarihana faritra 200 * 200mm na 300 * 300mm na habe lehibe kokoa
Ny milina fanamarihana laser an'ny Co2 dia misy ny milina fanamarihana laser an'ny laser Co2 ary ny milina marika laser an'ny laser Co2. Ny roa amin'izy ireo dia azo raisina ho teknolojia marika marika Co2 roa samy hafa. Ity karazana milina fanamarihana laser ity dia be mpampiasa hanamarihana ireo fitaovana tsy metaly, toy ny taratasy, hoditra, lamba, plexiglass, résin, acrylic, volon'ondry, rubber, ceramic, kristaly, jade. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny famonosana sakafo, toy ny sakafo, ary ny fonosana fanafody, ny famantarana ny vokatra ary ny laharana andiany. Ny mari-pamantarana dokam-barotra sasany dia namboarin'ilay milina fanamarihana laser an'ny Co2.
Ny masinina fanamarihana laser CO2 dia folo heny eo ho eo haingana noho ny masinina laser sokitra laser. Vokatr'izany dia manatsara be ny fahombiazan'ny marika laser. Izany dia mahatonga azy io ho tsara ho an'ny marika famokarana indostrialy.
Ny milina miaraka amin'ny rafitra haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha, miaraka amin'ny taratra laser ambony, zoro divergence kely ary rafitra laser mitambatra. Mety amin'ny fikojakojana, fahombiazana azo antoka, fahamendrehana avo lenta ary androm-piainana lava (ora 45000 max). Ny fitaovana dia vidin'ny fanodinana ambany, tsy misy fanjifàna, faritra manamarika lehibe, fahombiazana avo.
Denim sy lamba hafa manapaka sy sokitra
Fanamarihana amin'ny plastika
Karatra fampakaram-bady sy fanasana
Asa-tanana sy fanomezana
Sary sokitra hoditra sy Eva